FANAFIHANA MAHERY VAIKA : Valo mianaka indray maty nodoran’ny dahalo velona
Nihorohoro tanteraka ny mponina tao amin’ny Fokontany Morarano Kaominin’i Fiadanana, Distrikan’Ambohimahasoa noho ny firehetan’ny tranona fianaka-viana, omaly alina. 11 juillet 2017
Tamin’ny herinandro lasa teo no tonga nanafika ity tanàna ity ireo malaso nangalatr’omby saingy notoherin’ny fokonolona izy ireo tamin’izany, ka maty voatifitra ny anankiroa tamin’ireo malaso. Tsy nisy omby lasan’izy ireo aloha tamin’izany tamin’io fotoana io fa tafatsoaka ny sasany tamin’ireo olon-dratsy ka izao niverina namaly faty izao indray izy ireo. Nodoran’izy ireo tsy am-pihambahambana ity tranona fianakaviana iray ity, ka izao namoizana aina valo be izao.
Kila forehitra tanteraka ilay trano ary tsy nisy azo namantarana azy intsony izy valo mianaka nonina tao. Araka ny tatitra hatrany dia nofantsihin’ireto olon-dratsy avy any ivelany ilay trano amin’izay mba tsy ahafahan’izy mianakavy mitsoaka ny firehetana. Avy eo narehitr’izy ireo tamin’ny bozaka ilay trano. Ny lelan’afo sy setroka be no nanaitra ireo mponina manodidina. Na niezaka namonjy ihany aza ny mpiara-monina dia tsy nisy azo natao intsony fa efa kila forehitra tanteraka ilay trano.
Nanamafy, araka izany, ny manodidina fa “ efa nomanin’ireto dahalo ireto izao valifaty izao noho ny fahafatesan’ny namany anankiroa. Efa nisy rahateo ny vava nataon’izy ireo fa tsy maintsy hamalifaty izy ireo”. Taorian’izay dia raiki-tahotra mafy ireo fokonolona, ka tsy ela akory dia ity trano teo akaikin’ilay avy notafihina no lasibatr’ireo jiolahy, ka izao may sy namoizana aina izao mihitsy.
Efa misy ny olona ahiahiana ho mpitsikombakomba amin’izao raharaha izao, ka efa nidina ifotony nijery ny zava-nisy ny mpitandro filaminana ankehitriny. Mbola eo am-piandrasana ny valiny fanadihadiana ny rehetra.